AC Milan oo Empoli dhowr laacib & macallinkeediiba wada doonaysa! – Gool FM
(Milano) 19 Juunyo 2016 – Haddii Marco Giampaolo loo magacaabo macallinka AC Milan, waxaa la sheegayaa inay sidoo kale horay usoo raaci doonaan Riccardo Saponara, laacibka ay Roma leedahay ee Leandro Paredes iyo xiddigo kale oo ragga Empoli ka mid ah.
Warar maanta soo baxayey ayaa sheegay in uu dhacay kulan qarsoodi ah oo u dhexeeya Adriano Galliani, iyo la taliyaha maalgashadayaasha Chinese-ka ah ee doonaya inay iibsadaan Milan iyo macallin Giampaolo.
Waana macallinka u sharraxan inuu kooxda qabto haddii Silvio Berlusconi kooxda iibiyo, yeelkeede, MilanNews.it ayaa qoraya in Giampaolo uusan kaligii iman doonin balse uu la iman doono dhowr laacib oo soo baxaysa oo u safta Empoli.
AC Milan ayaa sidoo kale horay loo sheegayay in laacibkan ay Roma leedahay ee Paredes loogu yaboohay si loogu dhimo kharajka ay ku doonays Stephan El Shaarawy, balse waxaa misna haatan la sheegaya in Saponara uu dib ugusoo laaban doono Rossoneri oo amaahisay misna ka iibisey Empoli kaddib markii uu Milan ku faloobay.
GOOGOOSKA: Switzerland vs France 0-0, Romania vs Albania 0-1